Izifo eziqhutshwa yi-Eosinophilic (Uhlobo 2 ukuvuvukala)
Uhlobo II Lokuvuvukala Isiguli NavigatorIpulatifomu Yesiguli Yomhlaba Wonke Nesifo Somoya2021-11-11T11:05:32+01:00
Mayelana ne-Type 2 Inflammation Patient Navigator
Imfundo, ulwazi, namathuluzi.
Inhloso yale nkundla yezemfundo yesiguli wukuqwashisa okwengeziwe nge-Eosinophilic Driven Diseases (Type 2 inflammation) kanye nokunikeza ukuqonda okujulile kokuthi ziyini izifo zokuvuvukala zohlobo lwe-eosinophil-driven II, yiziphi izindlela zokwelapha ezingase zibe khona nokuthi yiziphi izinhlangano zesiguli ezinikeza ukwesekwa. zalezi zifo.
Isayensi yokuvuvukala kohlobo lwe-II ithuthuka ezindaweni ezifana ne-COPD kanye ne-bullous pemphigoid; ngakho-ke, akuzona zonke izimo eziqondwa ngokugcwele noma ezichazwe kuleli thuluzi.
Ziyini Izifo Zohlobo 2 Zokuvuvukala noma I-Eosinophilic-Driven?
Izifo Eziqhutshwa Eosinophil (EDDs) Izinhlobo Zesifo Sokuvuvukala Sohlobo 2, ezingathatha izinhlobo ezahlukahlukene. Ama-eosinophil aphakeme adlala indima ebalulekile ku EDDs. Ukungasebenzi kahle kwamasosha omzimba e-eosinophilic kunesibopho sokuqashwa nokusebenza kwama-eosinophils.
Kuyisistimu yokungezwani komzimba ngenxa yokusabela okweqile kwamasosha omzimba, okubangela izinkinga zesifuba somoya nezinye izifo. Amasosha omzimba, amaphaphu, amathumbu/isisu, kanye nesikhumba kungathinteka ngezindlela ezahlukene. Ulwazi olwengeziwe: https://gaapp.org/eosinophil-driven-diseases-introduction/
Imaphi amathuluzi I-Type 2 Inflammation Patient Navigator enikezayo?
Ngaphandle kokuqukethwe kwezemfundo, i-PN iphinde inikeze uhla lwezinye izigaba::
Isigaba Semibuzo: Zihlole ngokwakho ulwazi lwakho lwezifo zakho eziqhutshwa yi-Eosinophilic (Ukuvuvukala kohlobo 2).
Isipiliyoni Sami: Uzothola ithuba lokwabelana ngolwazi lwakho emibuzweni eminingi ethi yebo & no-cha, okufanele ikunikeze ukuqonda okungcono kwezihloko esixoxa ngazo kule webhusayithi. Lapho usuqedile ukuphendula yonke imibuzo, uzokwazi ukulanda i-PDF yazo zonke izimpendulo zakho futhi wabelane ngayo nodokotela wakho.
I-Virtual Booth Yenhlangano Yesiguli: Hlola ukuthi izinhlangano zesiguli ezibambe iqhaza zingakunikeza ini, ngolimi lwakho, nokuthi ungaxhumana kanjani nazo ukuze uthole usizo noma uhlanganyele nomphakathi wendawo wesiguli esifundeni sakho emhlabeni.
Ubani ongemuva kwale nkundla:
Le tilosi enesineke iyisinyathelo esivela ku-GAAPP, ngokusekelwa okukhulu kwe AstraZeneca, Sanofi, Futhi I-Regeneron.